Semalt Islamabad Specialist: Inona no fikarohana?
Ny tetik'asa fanentanana Search Engine dia teknika dizitaly momba ny dikan-teny izay mitaky ny fahazoana mijery môtô . Mba hamandrihana fisiana matevina eo amin'ny tambajotra fitahirizam-pikarohana, hametraka rakitra robots.txt ao amin'ny lahatahiry root an'ny tranonkalan'ny fikarohana ianao. Ireo rakitsoratra ireo dia manampy ireo mpitsoa-ponenana amin'ny tranonkala antsoina hoe mpitsikilo finday mahita sy mamaky ary mametraka ny pejy Internet anao. Ny fanamafisana ny tranonkala dia mifototra amin'ny teknika sy ny endriky ny sehatry ny tranonkala iray izay manampy ireo tranokalam-pifandraisana ireo toerana ambony ao amin'ny SERP.
Anatin'ity lahatsoratra SEO ity izay novolavolan'ilay manam-pahaizana avy amin'ny Semalt , Michael Brown, dia manoritsoritra ny fiasan'ny Internet sy ny asany.
Mpandroba iray amin'ny tranonkalan'ny fikarohana dia programa ordinatera tsotra. Ireo rindrambaiko ireo dia manana fahafahana mitsidika tranokala isan-karazany ary mahita ny vaovao atolotra ao amin'ny tahiry. Ity fampahalalana ity dia mety ho endriky ny votoatin'ny tranonkala mandalo amin'ny pejy web-nao. Ny tranonkalan'ny fikarohana dia mampiasa io fampahalalana io mba hampivoarana algorithm amin'ny alàlan'ny fametrahana ny rohy ho valin'ny fikarohana iray. Ireo olona izay manatsara ny toerana misy azy dia mampitombo ny fahafahan'izy ireo ho voasoratra ao amin'ny SERP amin'ny teny fanalahidy manokana.
Tahaka ny tranonkala tsotra, ny milina fikarohana dia atolotra ao anaty tahiry ary miasa amin'ny fampiasana ny tranonkala. Ny fiverenana an-tserasera dia midika fa ny fampiasana ny teny manan-danja sy ny tranokala hafa , toy ny soso-kevitra, dia midika fa ny fitaovam-pikarohana dia mametraka ny toetoetrany matematika hivoahana amin'ny kritika. Ny tranonkala web ho an'ny votoaty dia antsoina hoe ny laharan'ny pejy.
Rehefa mametraka fikarohana amin'ny alalan'ny tranonkala ny mpitsidika iray, ny algorithm amin'ny alàlan'ny fikaroham-bary dia tsy maintsy mamantatra hoe iza amin'ireo tranonkala no mametraka ny toerana misy azy. Raha mila mijery ny tranonkala iray ny vohikala iray, ny fampandrenesana fanamarinana tsy maintsy atao dia ny famerenana ny fampidirana. Ny vohikala iray misy ny fikajiana dia tokony hamela fikarohana mpikaroka ary hahita ny votoatiny ilaina. Raha te index, tokony misy robots.txt ao amin'ny lahatahiry root. Tsy toy ny tranonkala mahazatra ny tranonkala fikarohana, matetika dia mitaky toerana malalaka. Tsy maintsy manangona fampahalalana be dia be avy amin'ny tranonkala maro ho azy ireo izy ireo mba hahomby amin'ny fomba fiasany.
Mitifitra ny lafiny manan-danja amin'ny traikefa an-tserasera amin'izao fotoana izao ny mpilatsaka an-tserasera. Afaka mamorona tranonkala tsara kokoa ny vohikala amin'ny alàlan'ny fampiasana ny tranonkala mitsipaka ny asany. Ity fampiharana ity dia mahita ny fahaizan'ny tambajotra finday. Maro ireo fitaovana fitadiavam-bola manana mpilatsaka an-tsokosoko amin'ny tranonkala fifaneraserana. Ireo mpitsikilo amin'ny tranonkala dia afaka mitsidika ireo pejin'ny tranonkala iray ary mitondra ny ao anatiny rehetra ao amin'ny tahiry fandraiketana azy. Avy amin'ity loharanom-baovao ity, ireo vohikala ireo dia afaka mampiasa ity algorithm mathemika ity hametrahana ny tranonkala ho vokatra. Ny tranokala mendrika tsara indrindra dia tokony hanana ny laharana ambony amin'ny alàlan'ny fikarohana ataony. Ity lahatsoratra SEO ity dia manana fampahalalana marobe momba izay adinadin'ny Internet, ny fandehany ary ny fandraisana anjara amin'ny tranonkalan'ny fikarohana. Azonao atao ny manatsara ny tranokalanao amin'ny fampiroboroboana sy hahazo fahitana milina matevina Source .